March | 2014 | ဂန္တ၀င် | Page 7
Pho Thu Taw ဆိုဒ်သည် သတင်းကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ထင်ရှားသောဆိုဒ်များမှ credit ကူးယူဖော်ပြသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုဒ်တွင် ဟာသအမျိုးအစား စုံလင်စွာ တွေ့ရသည်။ Pho Thu Taw ဆိုဒ်တွင် မြန်မာ့ကျေးလက်ဟာသများ၊ လူနေမှုဓလေ့ ဟာသများ၊ သရော်စာပေများ၊ ၁၈နှစ်အထက် ဖတ်ရန်ဟာသများ၊ နိုင်ငံတကာဟာသများ၊...
Maukkha ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန် ၅ စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ Maukkha တွင် ကဏ္ဍများကိုဖော်ပြထားသည့်အပြင်ဆိုဒ် ညာဖက်အခြမ်းတွင် မှတ်သားဖွယ်ရာမြန်မာဆိုရိုးများ၊ မြန်မာစကားပုံများကိုဖော်ပြပေးထားသည်။ အဓိကဦးတည်ချက်မှာပညာရေး ဖြစ်သည်။ Mukkha တွင် အခြားသောကလေးများ ကဏ္ဍ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ၊ ဆရာအတတ်ပညာများ၊ နည်းပညာများ၊ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ Mukkha တွင်...
Danyawadi ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန် ၅ စက္ကန့်ကြာသည်။ Danyawadi တွင် ဒေါင်းလော့ဒ်လင့်များကိုနီညိုရောင်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းများအားအနီရောင်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ Danyawadi ၏ သတင်းရင်းမြစ်အနေဖြင့် မြန်မာမှုခင်းသတင်းများ၊ ရခိုင်အရေးအခင်း၊ မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးများကိုအသားပေးဖော်ပြသည်။ Danyawadi သည် မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ပညာပေးဆောင်းပါးများအသားပေးရေးသားလေ့ရှိသည်။ Danyawadi တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး...
The Irrawaddy ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန် ၅ စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ နောက်ခံအရောင်၊ ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်၊ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များကိုအရောင်တစ်မျိုးစီဖြင့် ဖတ်ရှုသူများအတွက် ကြည့်ရကောင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်တင်ဆပ်ထားသည်။ The Irrawaddy ၌ကြေညာများကိုဆိုဒ်ညာဖက်အခြမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ The Irrawaddy ၌အရေးကြီးသတင်းများကိုဆိုဒ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဆောင်းပါးများကိုကော်လံနှစ်ခုခွဲရေးသားဖော်ပြသည်။ ဦးတည်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပြင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အားကစား၊...
Ministry of Information ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန်ကြာချိန် ၁၀ စက္ကန့်သာကြာသည်။ Ministry of Information ၏ နောက်ခံအရောင်၊ ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်များ၊ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များအားသိသာပေါ်လွင်စေရန် အရောင်တစ်မျိုးစီသုံးထားပြီးစာလုံးကြီးဖြင့်ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ Ministry of Information တွင် သတင်းဓာတ်ပုံများ၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများပါ ထည့်သွင်းထားသည်။ သတင်းရင်းမြစ်သည် ယုံကြည်ရသည်။...
Aye Chan Mon ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် ၁၅-၂၀ စက္ကန့်အထိ ကြာသည်။ Aye Chan Mon ဆိုဒ်နောက်ခံကိုအပြာရောင် အသားပေးထားသည်။ Aye Chan Mon တွင် နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများခေါင်းစဉ်ကိုအနီရောင်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ Aye Chan Mon တွင်သတင်းအချက်အလက်များကို အနောက်ရောင်ဖျော့ဖြင့်ရေးသားပြီး ခေါင်းစဉ်ကိုအနက်ရောင်ရင့် စာလုံးပိုကြီးသည်ဖြင့်...
Myanmar Post (http://myanmarpost.blogspot.in/2014/02/phone-good-health-health-updates.html)
Myanmar Post Myanmar Post ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် ကြာချိန် ၅ စက္ကန့်သာကြာသည်။ ပင်မစာမျက်နှာတွင် ဆောင်းပါးများကိုကဏ္ဍအလိုက်ဖတ်ရန် မာတိကာကိုဖော်ပြပေးသည်။ မူရင်းရေးသားသူများ၊ သတင်းပင်မရင်းမြစ်များကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိ။ သို့သော် မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်များဝင်ရောက်ဖတ်ရှုရန် သတင်းခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်လိုက်လျှင် မူလသတင်းရင်းမြစ်ဆီသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်သွားသည်။လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းကိစ္စများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းစသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပသတင်းများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့်...
ThitHtooLwin ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန်ကြာချိန် ၅ စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ ThitHtooLwin ဆိုဒ်သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော စာဆောင်များကို ကူးယူဖော်ပြ လေ့ရှိသည်။ ကြေညာကဏ္ဍကိုဘေးနှစ်ဖက်တွင်ဖော်ပြသည်။ ThitHtooLwin ဆိုဒ်အတွင်းရှိ သတင်းဆောင်းပါးများကို ကဏ္ဍအလိုက်ဖော်ပြသည်။ ဆိုဒ် ဘယ်ဖက်အောက်ခြေတွင် သတင်းကဏ္ဍများကို ဖော်ပြထားသည်။ ThitHtooLwin သည်ကြေညာများသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ThitHtooLwin သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိသတင်းအချက်အလက်များကို အခြားမြန်မာအွန်လိုင်းဆိုဒ်များထက်...
The Transport News ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် ကြာချိန် ၅ စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ အထူးအရေးပေါ် သတင်းများကိုဆိုဒ်အပေါ်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေးထားသည်။ The Transport News ၌မြန်မာ့ငွေးကြေးဈေးကွက်များ၊ မြန်မာပြက္ခဒိန်များ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများရဲ့ နိုင်ငံများအားဖော်ပြပေးထားသည်။ မြန်မာသတင်းများကိုကဏ္ဍအလိုက် အထူးအရေးပေါ်သတင်းများအပေါ်တွင် ခေါင်းစဉ်များခွဲပြီးဖော်ပြသည်။ သတင်းရင်းမြစ်များမှာကိုယ်ပိုင် သတင်းထောက်များ၊ ဆောင်းပါးရေးသားသူများ၏သတင်းများကိုအများဆုံးဖော်ပြသည်။...
Popular Myanmar ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် မြန်နှုန်းသည် ၁၀- ၁၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။ ဆိုဒ်ခေါင်းကြီးပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာများကဲ့သို့ အကြီးဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ Popular Myanmar သည် ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုသိသာထင်ရှားသောအရောင်များဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြထားသည်။ Popular Myanmar သည် သတင်းတစ်ခုစီကိုဖော်ပြထားရင်း၎င်းနှင့်ဆက်စပ် သတင်းများကိုလည်းပူးတွဲဖော်ပြပေးသည်။အွန်လိုင်း Voting စနစ်နဲ့ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးပေါ့ပ်သီချင်းဆုရှင် လွှမ်းရတီဇော်၊...
Ygn News ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် မြန်နှုန်းသည် ၅စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ Ygn News သည် စာဖတ်ပရိသတ်များဖတ်ရှုရလွယ်ကူစေရန် အရေးကြီးသတင်း၊ လူကြည့်အများဆုံးသတင်း နှင့် အခြားသတင်းထူးများကိုထင်ရှားစေရန် အရောင်မျိုးစုံဖြင့် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိသည်။ Ygn News တွင် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ၊ မှုခင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊...
It is very useful to have English/Myanmar or Myanmar/English dictionary on your phone. English Myanmar dictionary works offline when you have no connection. The...
Zawgyi font isaMyanmar font with Burmese characters. It is also known as Zawgyi-One or zawgyi1 font. Updated versions of this font are still called Zawgyi-One not Zawgyi-Two. It is the...
Soccer Myanmar (http://soccermyanmar.com)
Soccer Myanmar သည် အားကစား ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အားကစား သတင်းများကို စုံလင်စွာဖော်ပြပေးနေသောဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Link: http://soccermyanmar.com Soccer Myanmar Soccer Myanmar is the most popular football news website in Myanmar. Soccer Myanmar publish the...
Kyaymon (The Mirror) သည် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများအပြင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကြေညာ ကဏ္ဍများနှင့်ပါ များများစားစား ရေးသားဖော်ပြထားသော ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Link: http://www.myanmar.cm/newspapers/kyaymon.htm Kyaymon Kyaymon isaBurmese language daily newspaper...
The Farm Media (www.thefarmermedia.com)
The Farmer Media ဆိုဒ်သည် သတင်းစုံလင်စွာပါဝင်သော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပက်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ရေးသားဖော်ပြနေသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Link: www.thefarmermedia.com The Farmer Media The Farmer Media is the first private and weekly news journal in...
The Trade Times Media (http://www.thetradetimesmedia.com/)
The Trade Times Media ဂျာနယ်သည် စီးပွားရေးကို အခြေခံထားသော ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အသီးသီးရှိ စီးပွားရေးကဏ္ဍမျိုးစုံကိုဖော်ပြပေးနေသော ဂျာနယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ The Trade Times Media သည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ငွေကြေး ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊...
Popular Myanmar (http://www.popularmyanmar.com/)
Popular Myanmar ဆိုဒ်သည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများအပြင် ဆောင်းပါးများ၊ မှုခင်းသတင်း များ၊ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို သတင်းများ ၊ အနုပညာရပ်ဝန်း သတင်းများ၊ အားကစား သတင်းများ စသဖြင့် သတင်းကဏ္ဍ အစုံအလင် ဖော်ပြထားသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Link: http://www.popularmyanmar.com/ Popular Myanmar Popular...
Messenger News Journal (http://www.messengernewsjournal.com/)
Messenger News Jouranl ဆိုဒ်သည် ပြင်တွင်း ပြည်ပသတင်းများ၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ အလှအပ၊ ကျန်းမာရေး၊ မှုခင်း၊ ရုပ်ရှင်လောက သတင်းများ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ စသော ကဏ္ဍစုံလင်စွာ ဖော်ပြပေးနေသော မြန်မာ အခြေဆိုက် သတင်းဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ Link: http://www.messengernewsjournal.com Messenger News Journal Messenger News...
Herjulekatha ဆိုဒ်သည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ မှုခင်း သတင်းများကို အဓိကရေးသားဖော်ပြနေသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြောင်းအရာများကိုလည်း အသားပေးရေးသားလေ့ရှိသည်။ Link: http://www.herjulekatha.com/ Herjule Katha Herjulekatha provides up-to-the-minute updates on Burmese news and other Asian news. Herjulekatha also...